The Beach House (2018) | MM Movie Store
Fan တှအေတှကျ မိသားစု အတူကွညျ့ရှု့သငျ့တဲ့မိသားစု သရုပျဖျော ဇတျကားလေးနဲ့ မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျဒီရုပျရှငျကား မှာဆိုရငျ အလုပျတှေ အရမျးကွိုးစားတဲ့ ကာရာ ဟာ
အခဈြရေးမှာလဲ အဆငျမပွခေဲ့သလို အလုပျမှာလဲ အဆငျမပွတှေေ ဖွဈပွီးတဲ့နောကျ အမရှေိရာ သူမကွီးပွငျးခဲ့ရာ မွို့ကို တဈခေါကျပွနျရောကျလာခဲ့တယျ
သူမ အမဆေီ မရောကျတာ နှဈတှအေတျောကွာသှားပါပွီ အမကေတော့ သူမ ဘာဖွဈလာတယျဆိုတာ မသိပမေဲ့ နှေးထှေးစှာကွိုဆိုခဲ့ပါတယျ….ဒါပမေဲ့ တဈယောကျထဲ အထီးကနျြနတေဲ့ အမေ ဟာနထေိုငျစရာမရှိပဲ လငျကောငျမပျေါ ဗိုကျတဈလုံးနဲ့ဖွဈနတေဲ့ ကောငျမလေး တဈယောကျကိုပါ အိမျပျေါချေါတငျပေးထားတာ သိလိုကျရပါတယျ
သူမ မနှဈသကျပမေဲ့ဘာမှတော့ အတှနျ့မတကျဖွဈပါဘူး….ကာရာ ဟာ အမေ နဲ့ အတူ မရှိတာ ကွာပွီးနောကျသူမ အမကွေောငျးကို သိပျမသိတဲ့ သူစိမျးတဈယောကျလိုဖွဈသှားခဲ့ကွောငျး တဈဖွေးဖွေး သိလာခဲ့ပါတယျသူမ အမကေတော့ သားသမီးတှေ ချေါရာမွို့ကွီးနောကျမလိုကျဖွဈပဲ သူခဈြတဲ့ ပငျလယျပွငျကွီး နဲ့ ဒီမွို့မှာပဲဖကျတှယျနခေဲ့ပါတယျ….
ဇတျလမျးလေးက အေးမလိုလို နဲ့ မိသားစု မတ်ေတာသရုပျဖျောဇတျလမျးလေး ဖွဈပွီး ပတျဝနျးကငျြထိမျးသိမျးရေး အတှကျပါတဈစတေ့ဈစောငျး ဖျောပွထားပါတယျ…ဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျကွပါ….
Fan တွေအတွက် မိသားစု အတူကြည့်ရှု့သင့်တဲ့မိသားစု သရုပ်ဖော် ဇတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကား မှာဆိုရင် အလုပ်တွေ အရမ်းကြိုးစားတဲ့ ကာရာ ဟာ
အချစ်ရေးမှာလဲ အဆင်မပြေခဲ့သလို အလုပ်မှာလဲ အဆင်မပြေတွေ ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် အမေရှိရာ သူမကြီးပြင်းခဲ့ရာ မြို့ကို တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်
သူမ အမေဆီ မရောက်တာ နှစ်တွေအတော်ကြာသွားပါပြီ အမေကတော့ သူမ ဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ မသိပေမဲ့ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်….ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ထဲ အထီးကျန်နေတဲ့ အမေ ဟာနေထိုင်စရာမရှိပဲ လင်ကောင်မပေါ် ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကိုပါ အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ပေးထားတာ သိလိုက်ရပါတယ်
သူမ မနှစ်သက်ပေမဲ့ဘာမှတော့ အတွန့်မတက်ဖြစ်ပါဘူး….ကာရာ ဟာ အမေ နဲ့ အတူ မရှိတာ ကြာပြီးနောက်သူမ အမေကြောင်းကို သိပ်မသိတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်လိုဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း တစ်ဖြေးဖြေး သိလာခဲ့ပါတယ်သူမ အမေကတော့ သားသမီးတွေ ခေါ်ရာမြို့ကြီးနောက်မလိုက်ဖြစ်ပဲ သူချစ်တဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီး နဲ့ ဒီမြို့မှာပဲဖက်တွယ်နေခဲ့ပါတယ်….
ဇတ်လမ်းလေးက အေးမလိုလို နဲ့ မိသားစု မေတ္တာသရုပ်ဖော်ဇတ်လမ်းလေး ဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး အတွက်ပါတစ်စေ့တစ်စောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်…ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါ….